काठमाडौं । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डवीच पार्टी एकतालाई बचाउँदै सहमतिका आधारहरु खोज्ने सहमति भएको छ । सोमबार बिहान स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि दुई अध्यक्षवीच पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डवीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा केपी ओलीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहभागी थिए । प्रचण्डका तर्फबाट वर्षमान पुन र जनार्दश शर्मासमेत सहभागी थिए ।
छलफलमा दुबै समूहका नेताहरु पार्टी एकतालाई बचाउन सहमति देखिएको र दुबैतर्फबाट दुरी एवं आशंका बढाउने क्रियाकलापहरु रोक्न सहमत भएका छन् । छलफलपछि एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकापसमा आशंका र दुरी बढाउने क्रियाकलापहरु रोक्ने सहमति भएको छ । र, विगतमा भएका समझदारीहरुका आधारमा पार्टी एकताको आधार तयार पार्न दुबै अध्यक्ष सहमत देखिनुभएको छ ।
Previous नेकपा विभाजन नहुने, ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहने,यसरी टर्‍¥यो संकट…हेर्नुहोस!
Next प्रचण्ड पक्षलाई गोकुलको प्रश्न – ‘डेरामा बसेकाले घरमुलीलाई हटाउन खोज्ने? किन गरे यस्तो प्रश्न…हेर्नुहोस।